ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “နော်ဝေးမှာပဲ သေချင်သေသွားပစေ ... ခေါင်းငုံ့ပြီးတော့ ပြန်မလာဘူး” ဆိုတဲ့ အဆိုတော် မွန်းအောင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
“နော်ဝေးမှာပဲ သေချင်သေသွားပစေ ... ခေါင်းငုံ့ပြီးတော့ ပြန်မလာဘူး” ဆိုတဲ့
အဆိုတော် မွန်းအောင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
(ဒီအင်တာဗျူးဟာ မြစ်မခမီဒီယာအတွက် ရည်စူးရေးထားတာမို့ ပြည်တွင်းဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ အသုံးပြုချင်ရင် မြစ်မခမီဒီယာနဲ့သာ ဆက်သွယ်ပါ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:56 AM
nancy kyaw said...
မွန်းအောင်က ဘာတွေ ပြောဘာတွေဆိုချင်တာလဲရဲရဲ သာပြန်ခဲ့ကြည့်ပါ မဖမ်းပါဘူး။ခင်ဗျားတို့လို မဖြစ်ညစ်ကျယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော်လှန်ရေး သမားထင်နေတဲ့လူကို အလုပ်ရှုပ် နာမည်ပျက်ခံပြီးမဖမ်းပါဘူး။နိုင်ငံရေး ထမင်းဂျိုးဟင်းဂျိုးတွေကများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကွာ။
Kyaw Zeyya said...
It is better for Myanmar. Don't come back forever!!!
KO MON AUNG,
Hat-off for the interview and great to know that you are suchagreat person andawarrior.
What you said is extremely true.
i just have to come out and write this comment how appreciate i am to read your interview because there arealot of regime's shit eater dogs here are writing stupid words.
i love u ko moon aung.
ကိုယ့်အမြင်၊ ကိုယ့်ခံစားချက်၊ ကိုယ့်ခံယူချက် စတာတွေကို အများကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ.. လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်း ဘယ်လိုပဲရှိရှိ စိတ်ထဲမှာရှိတာကို မဖုံးမကွယ် အရှိကို အရှိတိုင်း ရိုးသားစွာ ထုတ်ဖော်တင်ပြရဲတာကို လေးစားတယ်၊ ကြိုက်တယ်။
ရိုင်းချင်ရိုင်းမယ်၊ ယဉ်ချင်ယဉ်မယ်.. ရှေ့တမျိုး၊ ကွယ်ရာတမျိုးနဲ့ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ချင်ကြတဲ့ လူမျိုး မဟုတ်တာကတော့ သိသာပါတယ်။
သူထွက်သွားတဲ့ကာလက သူအရမ်းအောင်မြင်နေချိန်၊ နာမည်ကြီးနေချိန်.. အနုပညာသြဇာ အားကောင်းနေချိန်..
လူ့သဘာဝအတိုင်း.. အောင်မြင်မှုအရှိန်အ၀ါအပေါ် ငြိမ့်ငြိမ့်လေး အရသာခံ၊ လူပေါ်လူဇော် လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်..။
မှန်သည်မှားသည် အပထားပါ.. တော်ယုံခံစားချက်၊ ယုံကြည်ချက်နဲ့တော့ အချိန်တွေအများကြီးနဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ထားပစ်ခဲ့ဖို့ မလွယ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Ko Moon Aung..